Imvelaphi yamaZulu - Amaqembu ahlukene
Ngonyaka ka-1550 uMandela, inhloko eneziqu ezincane, ihlala ngaphansi kwe-Amandawe Hill emagqumeni aseningizimu yoMfula uMhlatuze ngaphambi kokuba ingene eNkwaleni Valley.
Wayenamadodana amabili, u-Qwabe noZulu, okwathi ngokweziko zomlomo baqhubeka behlukana, ngakho-ke uMalandela wathumela uQwabe ukuba aphile eduze nemifula emifula yomfula, endaweni eseduze ne-Empangeni manje, futhi isiZulu sathunyelwa enyakatho ahlale esifundeni soMfula i-White Umfolozi. Ngesikhathi esifanele, bobabili abazalwane bahlanganisa izinkampani zabo ezihlukene, futhi bobabili bakhokhela intela ehlukile (ukukhonza) kumphathi weMthethwa, owayenamandla kunawo wonke esifundeni.
Ngasekupheleni kwekhulu le-18 uDingiswayo waba yinhloko kaMthethwa. Ngesikhathi eseyinsizwa, kwadingeka ukubaleka ukuze aphile, njengoba uyise ecabanga ukuthi uzimisele ukumbhidliza. I-Dingiswayo yahamba kakhulu kulo lonke isifunda esaziwa ngokuthi yiKwaZulu-Natali.
Ngokuhamba kwakhe, umbono wakhe wanda futhi waziswa ekuhwebeni, okwakhula ngokuqhubekayo ngasechwebeni lasePutukezi laseDelagoa Bay Lapho ezwa ngokufa kukayise, wabuyela ehhashi, ethwele isibhamu, ukuze athathe ubuholi kaMthethwa. U-Dingiswayo wayengumholi ohlakaniphile futhi onamandla owazi ukuthi ukuncintisana komhlaba kanye nemithombo yemvelo yayilokhu ikhula kakhulu futhi ukuthi ikhono lokulawula ukuhwebelana namaPutukezi kwakuzoletha izinzuzo ezihlukile.
Ngalokho wabona ukuthi ukwakha ibutho lakwaMthethwa nokulandela kwakhe kwakubaluleke kakhulu. Kuze kube sekugcineni, wabeka ngendlela ehlelekile ukuba ahlangane neqembu elilodwa elihlelekile elimkhokhisayo, futhi lamanxusa labo ababenqobile empini.